Ngicabanga ukuthi ungathola kanjani imininingwane yekhadi le-Savings Bank? Lo mbuzo ubuzwe okungenani kanye nomnikazi walesi siqeshana esincane sepulasitiki. Kulolu suku, isikweletu esikhankanywe ngenhla kanye nesikhungo sezimali sikhiphe (noma, njengoba kubalandeli ngokwabo besho, bakhiphe) amakhadi epulasitiki angaphezu kwezigidi ezingu-30 (okuzobizwa ngokuthi "i-PC"). Abanikezwa kuphela ngekhredithi "epulasitiki", kodwa futhi nakomphakathi, umfundi, umholo. Ngesinye isikhathi, ukukhishwa okukhulu komuntu wokuqala kwavumela umkhiphi okhulunywe ngenhla ukuba athathe indawo ehamba phambili engxenyeni yemalimboleko yekhadi.
Kungani konke lokhu? Futhi ukuthi labo abafuna impendulo yombuzo mayelana nendlela yokuthola imininingwane yekhadi le-Savings Bank abambalwa kakhulu. Futhi kule ndaba ngingathanda ukuphawula okulandelayo: lolu lwazi lubaluleke kakhulu. Ngakho-ke, uma usutholile, kubalulekile ukuthatha zonke izinyathelo zokuzigcina endaweni ephephile, ukuze esikhathini esizayo umbuzo okhulunywayo awuvezi.
Noma yimuphi umfundi owaziyo ukuthi imali ivele ku-akhawunti, kufaka phakathi i-akhawunti yekhadi, ayikwazi ukuthatha kusuka ku-Nothingness. "Kuthuthukiswa" lapha noma ngokwabo noma ngosizo olungaphandle. Kuzo zombili izimo, umthumeli uzodinga isethi yedatha ekhethekile. Yebo, sisho izidingo. I-Sberbank, ngendleleni, ilalelisisa ngalesi sikhathi. Idatha ekhonjiwe yamukelwa yiwo wonke umuntu okhishwe "eplastiki" lapha. Yebo, yebo, babesemvilophini efanayo lapho uthola khona ishidi nge-PIN-code.
Ngokuphila ngokwayo, kuye kwafakazelwa kaningi ukuthi amakhasimende angakhathazeki ayeningi kakhulu. Inani labo alincike ebhange. Yilaba bafana abajwayele ukuzibuza ukuthi bangazithola kanjani imininingwane yekhadi le-Savings Bank. Njengomkhuba wokubonisa, kungakhathaliseki ukuthi kunezincazelo eziningi ezisebenza phakathi kwabo, kuzoba khona labo abazolahlekelwa imvilophu, bakhohlwe indawo ethile, bathi bangaboni emehlweni abo (kufanele kudalwe). Ngakho-ke, izindlela zokuthola idatha edingekayo zizochazwa ngezansi.
Okokuqala, ake sicacise ukuthi hlobo luni lwazi lusempikiswano. Ukuze i-akhawunti yakho "yepulasitiki" igcwaliswe yisihlobo, umngane noma umngane omuhle, udinga ukwazi:
• igama lesikhungo sebhange lapho umzuzi (okungukuthi, wena) kanye ne-akhawunti yakhe (ebhange) i-akhawunti yomsebenzi ahlinzekwa;
• isibongo, igama kanye ne-patronymic yomnikazi we-PC (futhi, eyakho);
• Inombolo yokuThengwa kwabathengi;
Ngaphezu kwalokho, uzodinga inombolo ye - akhawunti yomnikazi wekhadi.
Uma ungakabi nobuhlobo ne-imvulophu ekhonjiwe ngenhla, impendulo yombuzo wokuthi ungathola kanjani imininingwane yekhadi le-Savings Bank izobaluleka ngempela. Umuntu akakwazi kodwa ujabule ukuthi kunezindlela eziningana zokuthola oyifunayo.
Inketho elula ukubiza opharetha emgqeni "oshisayo" wesikhungo sezimali lapho uhanjiswa khona. Ngemuva kwenqubo encane yokukhomba, uzokwaziswa ngakho konke okudingayo.
Indlela yesibili yincwadi ye-elektroniki eya egatsheni lesifunda lomnikezeli. Kulo, kufanele uzise inombolo yegatsha lapho i-PC ivulwa khona, kanye nenombolo yayo negama lakho eligcwele.
Okokugcina, indlela enzima kunazo zonke (kepha ayikhohlekelwa) indlela yokuxazulula le nkinga yindlela eya kuSberbank. Imininingwane yekhadi ingatholakala lapha kusuka kunoma yimaphi abaphathi. Kodwa-ke, kokuba nekhompyutha yomuntu siqu kanye nepasipoti yomphakathi.
Njengoba ungabona, kunezindlela eziningana zokuthola ulwazi oludingekayo. Kodwa cabanga ngeqiniso lokuthi kwezinye izimo kungase kungabi yisikhathi sokuhambela umnyango okukukhonzayo. Ngakho-ke, uma uthola imvilophu ephethe i-PIN-code, unakekele indawo ephephile yokulondoloza kanye nolunye ulwazi kulo (imvilophu, ngokwemvelo).
"Piggy Bank" Sberbank: Izibuyekezo ikhasimende